Free ITIL Mck Test Test Practice | ITIL Foundation Ongororo Yokugadzirira
ITIL Mock testhaisi izvo asi miedzo yekuedzwa uye iyo ITIL aspirants inotora isati yasati yamboonekwa yeItest foundation test kuitira kuti ivo vaone kukosha kwekugadzirira kwavo. ITIL Foundation kuongorora kuongorora kunodhura uye mumwe haafaniri kuedza kuongorora kweTIL pasina kutora ITIL Mune miedzo. ITIL nheyo ndeyemhando yemvumo yekufanirwa kwevadzidzisi veIt uye ITES. Kana uri kuenda kuItest foundation test kana ITIL kuongorora pasina kugadzirira zvinoreva kuti uri kutora dambudziko re USD USD. Tariro iwe haungada kutora ngozi iyo.
Kubatsira kwaI ITIL Mock Test kana ITIL Foundation Exam Yokugadzirira
Kuzivikanwa neChiedza chekuedza
Wedzerai nekukurumidza nekururama
Kunzwisisa zviri nani mibvunzo
ITIL nheyo dzekuongorora inodhura kuongororwa, saka munhu anofanirwa kunge achiziva nzvimbo, ITIL inopikisa kubva ITS ndizvo zvakaitika. 40 mibvunzo inofanira kuedzwa mumaminitsi e60, iine nzvimbo mumamiriro ezvinhu akafanana uye inonzwa kuenzana kwakafanana kwekumanikidzwa usati wanyatsoongorora. Kutengesa kutyisa kuchapa chivimbo uye mugoveri achave akasununguka panguva chaiyo chaiyo ITIL nheyo yekuongorora.
Mibvunzo mubvunzo yeIITIL inonyanya kuoma, saka nguva dzose inopa mazano ekupa chiyero chekuongorora mushure mokuongorora chaiyo. Nokuedza ITIL kuongororwa, inopa kunzwisisa kwakanyanya mibvunzo, mibvunzo yemibvunzo uye izvo zvichatungamirira kuwedzera mukukurumidza uye kwakarurama.
Yose miedzo ine nguva shoma, saizvozvowo ITIL nheyo yekuongorora, 40 mibvunzo mu 60 maminitsi uye kupfuura nepakati ndeye 70%, saka imwe inoda kuva yakakurumidza. ITS.ITIL inopikisa test series zvichaita kuti iwe uite zvakanaka munguva yekugadzirisa paunenge uchiedza chaiyo ITIL miedzo.
ITIL Foundation Kugadzirira Kuongorora - 1
ITIL Foundation Kugadzirira Kuongorora - 2
ITIL Foundation Kugadzirira Kuongorora - 3
ITIL Foundation Kugadzirira Kuongorora - 4
As ITIL nheyo yekuongorora iyo inodhura miedzo uyezve zvakare iyo inowedzera mari yako yeramangwana, saka tinoita kuti uve nechokwadi chokuti iwe unofanira kudarika kuongorora chaiyo. Yedu ITIL Mock test series achakupa mhando yemibvunzo yakadaro kana kuti funga nezvekupedzisira ITIL nheyo yekuongorora dumps, iyo inokubatsira kunzwisisa mibvunzo nenzira iri nani uye iri nyore.
Tibatanidza isu pamwe chete nemamwe mashoko pamusoro ITIL kudzidziswa uye kuongorora
Mashoko ekuti bots:
itil foundation testmibvunzo nemhinduro 2016
itil foundation testmibvunzo nemhinduro 2017
nguva yakareba sei yekudzidzaitil foundation test
Zvinotora nguva yakareba sei kudzidza kuneitil foundation test
ITIL Certification Summary - Basics ye ITIL